Wararkii ugu dambeeyay qaraxyadii maanta ka dhacay agagaarka garoonka Aadan Cadde (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay qaraxyadii maanta ka dhacay agagaarka garoonka Aadan Cadde (SAWIRO)
Waxaa faah faahin dheeraad ah kasoo baxaysaa labo qarax oo aad u xoog badan oo maanta ka dhacay inta u dhaxeeysa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho iyo xarunta ciidanka AMISOM ee Xalane.
Labadaasi qarax ayaa la sheegayaa in loo adeegsaday labo gaari oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa.
Qaraxa koowaad ayaa la sheegayaa in loo adeegsaday gaari nooca raaxada ah, waxaana lagu weeraray bar-kontrool ah oo ku dhaw garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidanka nabad-sugidda qaranka iyo kuwa AMISOM.
In ka badan 10 qof oo u badnaa arday iyo ciidanka nabad-sugidda ayaa ku geeriyootay, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacanta tiro intaasi ka badan.
Qaraxii labaad oo si weyn looga maqlay guud ahaan magaaalada Muqdisho ayaa loo adeegsaday gaari weyn oo nooca xamuulka qaado ah, waxaana uu ka dhacay halka loo yaqaano Madino Gate oo ah irida laga galo xarunta ciidamada AMISOM ee Xalane.
Qaraxaasi ayaa la sheegaya inuu geystay bur-bur hantiyeed iyo mid nafeedba leh, waxaana qaraxyadaasi kadib la maqlay rasaas xoogan oo u muuqatay mid la is-dhaafsanaayay.
Wariyaasha warbaahinta Bulshoweyn oo booqday agagaarka goobaha ay qaraxyadaasi ka dhaceen ayaa sheegay in qaraxyadaasi bar-tilmaameedkoodu uu ahaa Hotelka Peace oo ku yaala meel aan sidaasi uga dheereyn xarunta ciidanka AMISOM ee Xalane iyo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Hoteelka Peace ayaa dhawaan lagu qabtay shirkii madaxda urur gobaleedka IGAD, waxaana Hoteelkaasi haatan degan diblomaasiyiin badan iyo siyaasiyiin kale.
Dhinaca kale, gawaarida gurmadka deg dega ah ayaa goobtaasi ka qaaday dad badan oo ku dhaawacmay qaraxyadaasi, waxaana dhamaantood la geeyay xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada Muqdisho.
Si kastaba ha ahaatee, qaraxyadaan ayaa noqonaya kuwii ugu horeeyay oo sanadkaan cusub ee 2017-ka lagu soo dhaweeyo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.